कार्यदलको प्रतिवेदनमा सचिवालयका कोही पनि सदस्यहरुबाट असन्तुष्टि व्यक्त भएको छैन : रावल - चारदिशा
August 27, 2020 चारदिशा
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्ती डा. भीम रावलले कार्यदले बुझाएको प्रतिवेदनले पार्टीभित्रको समस्याको समाधान दिने विश्वास दिलाएका छन् । उनले अहिलेसम्म सचिवालयका कोही पनि सदस्यहरुबाट प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि व्यक्त भएको आफूले नपाएको पनि स्पष्ट पारेका छन् । प्रस्तुत छ नेता रावलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
तपाईले तयार पारेको प्रतिवेदनप्रति माधवकुमार नेपालको असन्तुष्टि बाहिर आयो, किन ?
मैले अहिलेसम्म सचिवालयका कुनै पनि सदस्यहरूबाट मेरो प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि व्यक्त भएको पाएको छैन ।
माधवकुमार नेपालले भन्नुभएको छ, विधि र प्रक्रियाको कुरा गर्दाखेरि संस्थागत हुन सकेन । प्रतिवेदन जसरी तयार भएको छ,
तपाईहरूले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको लागि बनाउनुभयो, पार्टीलाई बलियो बनाउनको लागि होइन भनेर कुरा आएको छ नि ?
नेताहरूको कुराहरू जब पार्टीको बैठकमा आउँछन् । हामीलाई जब अध्यक्षद्वयबाट प्रस्तावित गरेर केन्द्रिय सचिवालयबाट अनुमोदित गरेर दिईसकेपछि हामीले विधान, नीतिअनुसार चलेरमात्रै व्यवस्थापन हुनसक्छ भनेर सुझाव दिईसकेपछि उहाँहरूले मान्नुहुन्न भने यसरी नकारात्मक निष्कर्ष निकाल्नु राम्रो होइन ।
प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको कुरा गर्दाखेरि उहाँले धमाधम गर्नुभयो नि ?
नियुक्तिको सम्बन्धमा हामीले तुच्छ शब्दमा भनेका छौँ, राजनीतिक नियुक्ति, कुनै पनि विवादास्पद भनाईहरू यसबीचमा गरिनुहुन्न । यो जब प्रतिवेदन कमिटि, सचिवालयमा प्रस्तुत हुन्छ, पछि स्थायी कमिटिमा प्रस्तुत होला, आवश्यकता पर्छ भने केन्द्रिय कमिटिमा जाला, यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भईसकेपछि राजनीतिक नीतिहरू हुनुपर्छ । त्यस्ता खालका नयाँ कामहरू हुनुपर्छ । यस बीचमा त्यस्ता खालका गतिविधिहरू हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो प्रस्ट सुझाव छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष कसलाई बनाइयो, तपाईलाई थाहा छ ? यसमा तपाईहरूको सहमति छ, कार्यदलको ?
हामीले जुन सुझाव दिएका थियौँ, त्यस्ता नियुक्तिहरू अहिले कुनै नयाँ हुनुुहुँदैन भनेर हामीले भनेका छौँ । त्यसको विपरीत कुनै पनि कामहरू भयो भने त्यसमा हाम्रो सहमति हुँदैन । यदि त्यस्तो भएको छ भने किन भयो भन्ने कुरा हामीले मात्र होइन, मलाई लाग्छ जुनसुकै नेताहरूले उठाउनु सही हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा जसरी नियुक्तिहरू भईरहेका छन्, त्यसमा पार्टीको सहमति छ त ?
हामीले प्रतिवेदन दिईसकेपछि अध्यक्षद्वयहरूको बीचमा कुरा भयो भन्ने मैले सुनेको हो । त्यसपछि पार्टीभित्र कही कतै त्यस्तो छलफल भएको मलाई जानकारी छैन ।
माधवकुमार नेपालको एक व्यक्ति, एक पदको बटमलाइन क्लियर छ त ?
यो प्रतिवेदन कुनै व्यक्ति र प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउनको लागि ल्याइएको होइन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई बलियो बनाएर अहिलेको विषम राजनीतिक परिस्थितिलाई बलियो बनाउने कुरामा छ । अब त्यसमा कुन नेताले कसलाई बलियो बनायो भन्ने कुरा होइन ।
अहिलेको अवस्थामा तपाईहरूको प्रतिवेदन अब शनिबार सचिवालयमा छलफल हुँदैछ ? त्यसपछि स्थायी समितिमा आउला । स्थायी समितिमा आउन फेरि पनि समय लाग्ने भयो ?
अब त्यस्तो पहिलेको जस्तो अनिश्चित विवाद हुँदै हुँदैन भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । अब १३ गते सचिवालयको बैठक होला । अहिले देशमा निषेधाज्ञा छ । त्यसपछि निसन्देह समितिको बैठक हुनैपर्छ । त्यसका कार्यसूचीहरूलाई क्रियाशील बनाउने हामीले देखेका छौँ ।
त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीले मान्नुपर्छ, देशको कार्यकारी प्रमुखले मान्नुपर्छ भन्ने हो ?
उहाँ २ जना अध्यक्षहरूले गठन गरेको कार्यदललाई, सचिवालयले अनुमोदन गरेको, अनि हामीले पार्टीको हितमा, असल व्यवस्थापनमा जोड दिएको कुरा उहाँले मान्नुहुन्न भन्ने हुँदैन ।
प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने पार्टीको निर्णय हो ?
जो मान्छेहरू पदलाई व्यक्तिगत स्वार्थको रूपमा हेर्छन्, ती व्यक्तिले कसलाई बलियो बनायो भनेर हेर्छ, हामीले त्यसरी हेर्दैनौँ । हामी यो पार्टीको नेता र कार्यकर्ता देशको सेवाको लागि लागेका छौँ । हामीले कुनै व्यक्तिविशेषलाई बलियो बनाउने होइन, हाम्रो आशय । हाम्रो आशय के हो भने पार्टीलाई बलियो बनाउने । हामीले यस्तो उद्देश्य कहिल्यैपनि राखेका छैनौँ ।